Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Ariifachiisaa Sadaffaa, Waggaa Afuraffaa bara shanaffaa taa’aa jira. Yaa’ii kanaan kaleessa muudama fi wixinee addaaa kan labsee yoo tahu, muudama Kaabinootaa 16, akkasumas angawoota mootummaas muudama isaaniillee raggaasiseera.
Caffeen yaa’ii isaa kaleessaatiin yoo muudama dabarsu gaazexeessaa Oromoo jiruu baqaatii wagga 16 booda biyyatti deebi’e Daayrektera Saba Himaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa; Oromiyaa Biroodkaastiing Neetwork taasisuun muudeera. Obbo Habtaamuu Damissee Daayrekterri Waajjira koomukeeshinii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa haala muudama kaabiinotaa 16 fi angawoota mootummaa kaanii yoo dubbatan muudamni marti qorannoon irratti gaggeeffamee bu’aa qorannoon namni bakka sana gitu ramadamuu himan.
‘Mootummaan akka mootummaatti gurmaa’iinsa isaa yeroo yeroodhaan sakattahuu qaba ture; gurmaayinsi koo sirriitti saba bira gahaa jiraayii?, Bu’a qabeessaayii kan jedhu kana yeroo yerootti, yoo xiqqaatee xiqqaate waggaa kudhanii fi wagga shan keessatti qorannaadhaan ilaalaa deemuu qaba ture. Kuni ta’aa hin turre bara dheeraadhaaf. Seenaa dhuma biyyattii keessaa akka kanatti, qorannaa ballaa, ummata ballaa hirmaachise taasifamee kan gurmaa’insi kuni irra deebi’amee ilaalame yeroo jalqabaatiifi kuni jechuudha.’- Obbo Habtaamuu Damissee.
Warri muudame kun gulantaa ilaalame warra guutee akka Obbo Habtaamuutti. Mohaammed Adamoo muudama caffee kanaan daayirektera Oromiyaa Broodkaastiing Neetwork tahuun muudameera. Innis biyya baqaa turee ji’aan dura biyyatti ka gale yoo tahu, waanti natti kenname kuni itti gaafatama guddaadha jedhe.
‘Kun itti gaafatama guddaadhaa; biyyi gara deemokraasiitti deemaa jiraa, deemookraasiin ammoo yoo miidiyaadhaan hin deeggaramin hin ta’uu, kanaafi dirqama ulfaataadhaa garuu, ummatni keenya dheebuu miidiyaa baayyee qabaa, wannni bara baayyee hawwaa turee miidiyaan kun hojii babbareedaa hojjechaa tureeraa, mana kanaaf deeggarsi guddaan karaa caffees karaa ummataas jiraa, garuu amma yoonaatti rakkoo hoogganaa qaba ture hojjettoonnis komii kaasaa turanii, hoogganaa ogummaa gaazexeessummaa qabu barbaadaa turanii; egaa karaa tokko dirqamni isaa baayyee ulfaataadhaa, karaa kaanimmoo carraa gaariidhaa ani akkasittan ilala.’ Mohaammed Adamoo.
Mohaammed, hojiin eger Saba himaa kana jabeessuu ulfaachuu mala jedha; biyyi keenya muuxannoo walabummaa ‘Piressii’ kan hin qabne waan taateef sun hojii guddaa dha jedha. Kanaafis mootummaan nami akka yaadasaa walabummaan ibsatuuf dirree jiru ballisuu akka itti fufuu qabu, ummatnis mirgi walabummaa ibsachuu yoo kabajamuuf haalaan itti fayyadamuu danda’uu qaballee jedha.
​ Haala jijjiirama biyya keessatti mullataa jiru fayyadamuun beektonni Oromoo kaan biyya alagaa jiran kaanis gara biyyaatti deebi’aa saba keessan yeroon tajaajilaa jedhe Mohaammed.
Daayrektera Waajjira Koomunikeeshinii Caffee Oromiyaa Obbo Habtaamuu namootni akka Mohammed gara aangootti dhufuun gurmaa’insi kun qorannoorratti hundaa’ee dhufuudha malee waan haarawa miti jedhan.
‘Qaamni dhimma kana raawwatu, nama dhaabbata kana fuulduratti tarkaanfachiisuu danda’u jedhee yaaduu, yeroo dhiyeessu mariin gaggeeffamee irratti walii galamee mirkanaa’a waan ta’eef, kuni adeemsuma Kanaan duraatiin waan deemeedha. Waanti adda godhu qorannoorratti hundaa’ee gurmaa’insi kun dhufe. Obbo Habtaamuu Damissee
Harras caffeen oolmaa isaa harraan, muudama angawoota mootummaa naannoo oromiyaa 9 raggaasiseera.